Yusuf Garaad: August 2017
Maxaabiista Soomaaliya ee ku xiran India ayaa maanta 26 ka mid ah lagu xukumay min 7 sano oo xarig ah iyo ganaax. Hore ayaa waxaa ay isla maxkamaddaasi xukun min 7 sano ah ay ku ridday isu-geyn 31 Maxbuus.
Bishan 19-keeda ayaa la filayaa in 61-ka Maxbuus ee harsan ay Maxkamaddu ku riddo xukun.
Halkaas waxaa ku soo geba-geboobaya xukunka Maxaabbiista Soomaaliya eek u xiran Mumbai.
Heshiis ay Soomaaliya la saxiixatay India oo maxaabbiistaas lagu soo celinayo dalkooda ka dib marka uu xukunku ku dhaco ayaa wuxuu qorayaa in marka hore heshiiska ay ansixiyaan labada Baarlamaan ee Soomaaliya iyo India.
Axmed Xiish oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee New Delhi ayaa dhowaan goor dhoweyd i soo gaarsiiyay xogtan, taas oo ay mahaddeeda leedahay Safaaradda Soomaaliya.
Posted by Yusuf Garaad at 18:09:00
Munaasabad si aad u qurux badan loo soo agaasimay ayaan xalay magaalada Hyderabad kagala qeyb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan oo u badan arday.
Munaasabadda oo ay ka soo qeyb galeen dhowr boqol oo Soomaali ah oo dhallinyaro u badan waxaa soo agaasimay Safaaradda Soomaaliya ee New Delhi iyo ardayda Soomaaliyeed ee Hyderabad waxaana loogu talo galay in lagu soo dhoweeyo aniga iyo wafdigeyga, taageerana loogu muujiyo Dowladda Soomaaliya.
Waxaan iska xog wareysannay dalka waxaanna aniga, Xeer Ilaaliye Axmed Cali-Daahir iyo Danjire Ebyan Ladane aan ka jawaabnay su’aalo muhiim ah, qaarkoodna xasaasi yahay oo ay dhallinyaradu na weydiiyeen.
Waxaan munaasabadda kula kulmay dhallinyaro aqoon iyo faham wanaagsan, aftahan ah, qaarkood ay suugaanleey yihiin oo dhammaantood ay ka muuqato astaan waddaniyadeed.
Aad ayaan ugu mahadcelinayaa ardayda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Hyderabad, India.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelianayaa ardaydii wiilasha iyo gabdhaha lahaa ee ubaxa udgoon igu soo dhoweeyay markii aan shalay imid Hotelka aan saaka ka sii baxayo.
Waddaniyiin dadkooda, dalkooda iyo Dowladdooda jecel ayaan ku arkay Hyderabad, waana ka mahadcelinayaa soo dhoweynta quruxda badan.
Posted by Yusuf Garaad at 02:36:00
Maxaabbiis Soomaali ah oo maanta lagu xukumay Mumbai
15 Maxbuus oo ka mid ah 118 – ka Maxbuus ee Soomaalida ah ee ku xiran magaalada Mumbai oo aan hadda joogo ayaa maanta ay Maxkamadi ku ridday xukun.
15 - ka maanta Maxkamadda la soo taagay waxaa lagu xukumay min 7 sano oo xarig ah.
Posted by Yusuf Garaad at 12:49:00